XOG: Maxaa kala socotaa tallaabooyin shaqo joojinta ah ee M/weyne Deni sameeyey & mas’uul diidey inuu xafiis wareejiyo. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
XOG: Maxaa kala socotaa tallaabooyin shaqo joojinta ah ee M/weyne Deni sameeyey & mas’uul diidey inuu xafiis wareejiyo.
June 28, 2021 Xuseen 1
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa qaaday talaabooyin kuwajahan wax ka qabashada marxaladda PLTV, oo aan xogtiisa maalmo kahor idinla wadaagnay, waxayna kala yihiin.
1- Madaxweyne Deni, ayaa amar toos ah ku amray wasaaradda Warfaafintu in ay masuuliyadda TV-ga la wareegto ilaa inta uu ka magacaabayo Agaasime guud, Wasiirka warfaafinta oo fulinaya amarka Madaxweynaha ayaa isna Kuxigeenkiisa Cabdisalaan Xaaji u wakiishay in uu fuliyo amarkan lana wareego shaqada Tv-ga.
2- Hanti Dhawrka guud ayaa sidoo kale amray in gaadiidka laga iibshay Miisaaniyada Tv-ga ee lagu xiray Taarikada Shacabka laga dhigo maamulkii hore, lagana dhigo mid dawladeed, sidaas oo kale xisaabadka gaarka ah ee shaqsiyaadka la tuhmayo ayay amreen in la xayiro, ayna amreen baaris toos ah.
3- Agaasimihii hore, dadaalo uu ku doonayay in uu kusii joogo xilka ayuu sameeyey, balse wuu ku guuldareystay, waxaana siyaasiin iyo xildhibaano uu aruuriyey ay isku dayeen in ay joojiyaan baarista Hanti Dhawrka, laakiin wareegto ayaa kasoo baxday arrintaas.
4- Wasiir kuxigeenka wasaaradda Warfaafinta Cabdisalaan Xaaji ayaa berrito toos ula wareegi doona shaqada Tv-ga iyo maamulkiisa, dhinaca kalena Agaasimihii KMG ahaa ayaa wada abaabulka xildhibaano iyo siyaasiin si ugu yaraan looga qafiifiyo cadaadiska xagga Hanti dhawrka ah.
Bililiqo ….. Bililiqo… Agaasimihi hore wuxuu isku cadeeyey in uu yahay bililiqo socota… Agaasimaha hore wuxuu kala garan waayey, wax uu isagu leeyahay iyo waxa shacabku leeyahay… war waa hani qaran… Cabdwali baa yaabay..